चितवन प्रिमियर लिग शुक्रबारदेखि - लोकसंवाद
श्रावण ३०, २०७७, शुक्रबार
चितवन प्रिमियर लिग शुक्रबारदेखि
चितवन । चितवन प्रिमियर लिग टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भोलि शुक्रबारदेखि यही माघ २५ गतेसम्म नारायणगढको क्याम्पाचौरमा पहिलो पटक चितवन प्रिमियर लिग गर्न लागिएको हो ।
नारायणी एडभर्टाइजिङ एन्ड इभेन्ट्सको आयोजना र चितवन क्रिकेट सङ्घको सहआयोजनामा प्रतियोगिता हुँदैछ । प्रतियोगितामा जिल्लाका पाँच टिम भरतपुर गुर्खाज, माडी टाइगर्स, इच्छाकामना वारियर्स, सौराहा स्यान्ड्स र राप्ती ¥यापिडसको सहभागिता रहेको छ ।
प्रतियोगितामा सहभागी टिमले दुई जना राष्ट्रिय खेलाडी (अन्डर १९) अनिवार्य र तीन जना स्थानीय खेलाडी अनिवार्य राख्नुपर्नेछ । प्रतियोगिताको विजेताले दुई लाख नगद, ट्रफी, मेडल र उपविजेताले एक लाख नगद, ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्नेछन् ।
यस्तै प्रतियोगिता अवधिभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरुलाई म्यान अफ दि सिरिज, बेस्ट बलर, बेस्ट ब्याट्सम्यान, बेस्ट अलराउण्डरको पुरस्कार प्रदान गरिने छ । यस्तै प्रत्येक खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई म्यान अफ दि म्याचको ट्रफी प्रदान गरिने छ । प्रतियोगिताका उत्कृष्ट तीन खेलाडीलाई नेपालकै सबैभन्दा ठूलो व्यवसायिक लिग एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपीएल)को टिम चितवन टाइगर्सबाट खेल्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको आयोजकले जनाएको छ ।
इभेन्ट्सका प्रबन्ध निर्देशक राजु चौधरीले चितवनको क्रिकेट विकासका लागि प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले चितवनमै क्रिकेट रङ्गशाला बनिरहेको अवस्थामा यस प्रतियोगिताले चितवनको क्रिकेट विकासलाई थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रहरीको ७२ घण्टे अनुसन्धान : हत्याकाे कारण यौन हिंसा कि बुटिक समूहको मोटो रकम ?
प्रकोपमा पूर्वसूचनाको उपयोग र अनपेक्षित धनजनको क्षति न्यूनीकरणका कार्यभार
मानसिक रोगकाे असर : बच्चाहरूले ओछ्यानमा पिसाब गर्ने समस्या र निराकरण
मानिसकाे मूल्यांकन : गाडी चढ्दैमा सभ्य होइन्छ र ?
अवैध रुपमा ल्याउँदै गरेको सामान बरामद